ရန်လိုရန်ပြုဆဲဆိုခံနေရပါသလား??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရန်လိုရန်ပြုဆဲဆိုခံနေရပါသလား???
Posted by koyin sithu on Sep 6, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 14 comments
တစ်ခါတုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော့်ကို အွန်းလိုင်းမှာကော၊ ဖုန်းထဲမှာပါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆဲရေး တိုင်းထွာတာခံဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ဆရာသမားတွေရဲ့ အဆုံးအမအကြားမှ မို့လို့ စိတ်ရှည်သည်းခံနေခဲ့ပေမဲ့ အခုချိန်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဒေါသနဲ့ တစ်ခုခု တုံ့ပြန်မိမှာသေချာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုက ကျွန်တော်ဟာ တားရော့ဗေဒင်ထုတ်လေးနဲ့ မဟာဘုတ်မှတ်စုစာအုပ်လေးကိုင်ပြီးတော့ အဘမင်းသိင်္ခတပည့်ကြီးတွေနောက် လိုက်ရင်း ဗေဒင်ဟောပြခဲ့ဖူးတယ်။ အစုလိုက်နယ်ထွက်ပြီး အခမဲ့ဗေဒင်ဟော ဒါနပြုကြတဲ့ စီနီယာ တပည့်ကြီးတွေနောက်က ပညာသင်ရင်း လိုအပ်တာ ကူညီရင်း သူတို့မောလို့ နားတဲ့အချိန်မှ ရောက်လာတဲ့ သူတွေကို သိသမျှလေး ပြန်တွက်ပေးတာလောက်ပါ။ မှတ်မှတ်ရရ နယ်မြို့လေးတစ်ခုမှာပေါ့ အဲ့ဒီလူရဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ ရည်စား ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော်က ဗေဒင်ဟောပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်ဗေဒင်တွက်ပေးပြီး သိပ်မကြာမှာပဲ အဲ့ဒီကောင်မလေးဟာ ထိုလူနဲ့ ပြတ်သွားကြပါတယ်။ ဒီလူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ဟောပြောချက်နှင့် ယတြာ တစ်ခုခုကြောင့် သူ့ရည်းစားကောင်မလေးနဲ့ ပြတ်သွားတယ်လို့ ယုံကြည်နေပုံရပါတယ်။ ဗေဒင်ဆရာတွေရဲ့ စည်းကမ်းထဲမှာ မိမိအပေါ် ယုံကြည်စွာနဲ့ လာမေးသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို စောင့်ထိန်း လျှို့ဝှက်ပေးရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပါ။ အချစ်ဆိပ် ကိလေသာမီး သင့်နေတဲ့ ထိုလူ မစဉ်းစားနိုင်ဘဲ ကျွန်တော်ကို ဖုန်းထဲမှာကော၊ အွန်လိုင်းမှာပါ မိုးမွှန်အောင်ဆဲ ခြိမ်းခြောက်ပြီး အထပ်ထပ်မေးခဲ့ပေမဲ့ အဲ့မိန်းကလေး ဘာတွေ ကျွန်တော့်ကို မေးခဲ့လဲဆိုတာ မဖြေခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ ထိုလူက မသိလေ ထပ်ဆဲလေ သိချင်လေ ကျွန်တော်က မပြောလေနဲ့ ထပ်ဆဲဆိုလေနဲ့ မိုးမွှန်နေတော့တာပါပဲ။ ထိုလူကျွန်တော်ကို ဆဲတဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်ခုထိ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတာကတော့
မင်းဗေဒင်ဆရာအစစ်ဆိုရင် ငါမင်းကို လာဆဲမှာကို မင်းသိရမှာပေါ့တဲ့
ပြီးတော့ မင်းကြိုသိနေရင် ငါလာမဆဲအောင် ယတြာကြိုချေထားရမှာပေါ့တဲ့။
နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပါသေးတယ်။ မင်းတို့လို ဧကံသဗျာကရဏ အမည်ခံတဲ့ အဘအမည်ခံတပ်ပြီး ဗေဒင်ဆရာတွေဟာ မကောင်းဘူးတဲ့လေ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လို ပြောနိုင်ရတာလဲ ကျွန်တော်ပြန်မေးတော့ ဗေဒင်ဆရာတွေမကောင်းဘူးဆိုတာ မင်းတို့ ဗေဒင်ဆရာချင်းပဲပြောတာလေတဲ့။
ကျွန်တော်က ဘာလိုအဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် သူပြောတာကို သေချာစဉ်းစားသွားမိပါတယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ကို စိတ်ဆိုးဖို့ မေ့သွားပါတယ်။ ဖြတ်သန်းဖူးတဲ့ အဆဲခံဖူးတဲ့ ဗေဒင်ဆရာလေး ဘ၀နဲ့ ဒါအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ ထားပါတော့။ ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်တယ် သူအခုလို လာဆဲမှာကို ငါကဘာလို့ကြိုတင်သိမနေရတာလဲ။ ဗေဒင်ဆရာတွေကကော ၀မ်းကျောင်းတူ ဗေဒင်ဆရာချင်းကို ဘာလို့ မကောင်းကြောင်းကို ပြောရတာလဲလို့။ အတိတ်၊ အနာဂါတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် သုံးပါးလုံးကို တွက်ချက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ထက် များစွာ ထူးချွန်သော ဗေဒင်ဆရာတွေကကော ဘာဖြစ်လို့ သူပြောသလို ကြိုမသိနေသင့်ဘူးလား။ ကျွန်တော်လည်း ဥာဏ်မမှီလို့လားမသိဘူး။ အဖြေ ခုထိထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ အဲ့အချိန်ကစလို့ ဗေဒင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှကို ဆက်မစဉ်းစားဘဲ အကုန်လုံးကို လွှတ်ချပြီး ကျောခိုင်းနေလာခဲ့တာ ခုထိထက်တိုင်ပါပဲ။
ထားပါတော့လေ။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက လူဆိုတာ ယုံကြည်မှုနဲ့ အသက်ရှင်နေကြတာပါ။ ကျွန်တော့်ကို မိုးမွှန်အောင်ဆဲတဲ့ လူဟာလည်း သူတစ်ခုခုကို ယုံကြည်လို့ ကျွန်တော့်ကို ဆဲရေးတိုင်းထွာခဲ့တာပါ။
ဒီနေရာမှာ အဘမင်းသိင်္ခပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခုကို သွားပြီး ကျွန်တော် သတိရမိတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် လွယ်ပါတယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပုတ်ခတ်လိုက်ပေတော့။ ချက်ချင်းကြီး ရန်သူကြီး တစ်ယောက်လို တုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီတော့ ငါလူတို့တဲ့ လောကကြီးမှာ ကျင်လည်ကျက်စားတဲ့အခါ သူတစ်ပါးရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်တော့မှ သွားပြီး မတိုက်ခိုက်လေနဲ့တဲ့။
အိမ်တစ်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ ဖြစ်ဖြစ် ပြသနာရဲ့ အဓိကတရားခံဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုအားပြိုင်တာကနေ စတာများပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အထင်နဲ့ အမြင်ရယ်ပါ။ သူရဲ့ ယုံကြည်မှုကို မှားနေတယ်လို့ ကိုယ်က ထင်နေတာက မြင်နေတာက ပိုဆိုးပါတယ်။ တကယ်တော့ လောကကြီးဟာ အထင်ဟာ အထင်ဖြစ်တယ်။ အမြင်ဟာ အမြင်သာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယုံကြည့်မှုတွေ လွန်ကဲနေရင်တော့ အမှန်တရား တစ်ခု ဖြစ်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ ယုံကြည်မှုမတူတဲ့လူတွေကြားမှာ တစ်လှေတည်းစီး တစ်ခရီးတည်းသွားနေကြတဲ့ အချင်းချင်း ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်တဲ့ စကားတွေ မပြောဖို့ အမြဲသတိထားပြီး နေထိုင်ရပါတယ်။
အပေါ်ဆုံးက ဖော်ပြထားတာလေး ဆက်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော်လို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေတာတောင် မှ အဆဲခံရပြီ ရန်လိုခံနေရပြီဆိုရင်တော့ မိမိအပေါ် မနာလို၊ ရန်ပြု ရန်လိုခံနေရပါက တန်ပြန်ယတြာလေးတစ်ခု မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အသိလေးထားပြီး အသုံးချနိုင်ကြပါစေဗျာ။
ကျောက်မီးသွေးကို အမှုန့်ပြုလုပ်ပြီး ပုလင်းထဲကိုထည့်ကာ ညဘက်-အိပ်ခါနီးအချိန်တွင် ကိုယ့်ကိုရန်လိုနေသောသူ၏အမည်ကိုခေါ် မျက်နှာပေါ်လာအောင် အာရုံပြု၍
မိမိ၏ဘယ်ဘက်ခြေဖ၀ါးကို လက်သုံးချောင်းနှင့် ပွတ်ပေးလိုက်ပါ။ ရက်ပိုင်းအတွင်း အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။
ကျောက်မီးသွေးကို ပုလင်းထဲ ထည့်တာက ဟုတ်ပါပြီ..ခြေထောက်ကိုပွတ်ဆိုတာလည်း.သိ့ပြီ…ပွတ်ရမှာက..ဘယ်လိုလဲ..ပုလင်းနဲ့လား…ကျောက်မီးသွေးကိုလက်နဲ့ယူပြီးပွတ်ရမှာလား..ယူရမယ်လက်က..ဘယ်(ဝါ)….ညာ..သိ့ပါရစေဗျာ..
ဒီနည်းလေးက အလုပ်လုပ်သူတွေ အတွက်အသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းလေးလို့ ထင်ပါတယ် … ခြေဖ၀ါးမှာ သူ့နံမည်ကိုခေါ်ပြီးပွတ်ရတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်ရော သူ့အတွက်ပါကောင်းပါ့မလား ……… နံနှိမ်သလို များဖြစ်နေသလားလို့ စိုးရိမ်လို့ပါ ….. ကိုရင်ရေ …. ညီမကတော့ ယတြာဗေဒင်တွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်တဲ့ယတြာက ယခုဘ၀အတွက်ကောင်းပေမယ့် သူတစ်ပါးကို ကံနှိမ့်အောင်လုပ်မိမှာတော့ စိုးမိတယ် ………. ဖော်ပြပေးတဲ့စေတနာကိုကျေးဇူးပါ ….. ကိုရင့်နည်းကိုတော့ မှတ်ထားပါမယ် …. လူဆိုတာကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ ရောက်ရင်တော့ ဘာမဆို ကောက်ရိုးလေးတောင် အကူအနေနဲ့ ဆွဲမိသေးတာပဲလေ ………
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် လွယ်ပါတယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပုတ်ခတ်လိုက်ပေတော့။ ချက်ချင်းကြီး ရန်သူကြီး တစ်ယောက်လို တုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီတော့ ငါလူတို့တဲ့ လောကကြီးမှာ ကျင်လည်ကျက်စားတဲ့အခါ သူတစ်ပါးရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်တော့မှ သွားပြီး မတိုက်ခိုက်လေနဲ့တဲ့။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေတာတောင် မှ အဆဲခံရပြီ ရန်လိုခံနေရပြီဆိုရင်တော့ မိမိအပေါ် မနာလို၊ ရန်ပြု ရန်လိုခံနေရပါက တန်ပြန်ယတြာလေးတစ်ခု ဆိုတာလေးက ကွက်တိပဲ ဗျို့ ….။
ဒီလတွေအတွင်း မျက်နှာမြင် ရိုက်ချင်ပါစေ ၊ အသံကြား နားခါးပါစေ ဆိုတဲ့ ဆုပြည့်နေသလားမသိဘူး ..နေရင်း ထိုင်ရင်း မျက်မုန်းကျိုးခံနေရတယ် … ခွိခွိ ။ ယတြာလေး ဘာလေး လုပ်ဦးမှလို့ ထင်နေတာ …. ကိုစည်သူရယ် ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲ ကျသလိုပါပဲ အဟိ
ပြောမယ့်သာပြောတာ … ကိုယ်တိုင်ကတော့ လူမုန်းများလာလျှင် ညဘက်နဲ့ မနက်ဘက်ကို မေတ္တာသုတ်ပဲ ရွတ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုစည်သူ့ နည်းလေးကိုတော့ … သူများတွေအတွက် မှတ်ထားပေးပါတယ် … ပြန်ပြောပြရအောင်ပါ ။ ဒါနဲ့ .. လက်သုံးချောင်းနဲ့ ပွတ်တာကလေ … ဘယ်ဘက်လက်လား ညာဘက်လက်လား …. နောက်ပြီး .. ဘယ်နှစ်ချက်ပွတ်ရသလဲ ဆိုတာလေး … ပြောပေးပါဦးနော် … တခြား လူတွေကို ပြန်ပြောပြလျှင် ကျွန်မလိုကပ်သီးကပ်သတ်တွေးတဲ့ လူမျိုးနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ..ပြန်ဖြေနိုင်အောင်လို့ပါ ။ အန်းနီးဝေး ယတြာနည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ။
ရန်လိုရန်ပြုမှုတွေ များနေလို့ စိတ်ညစ်နေတာ…
အသံကြား ရုပ်မြင်လျှင် ဆဲချင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိခဲ့လေလား မသိ…
ကရင်စည်သူပေးတဲ့ နည်းလေးနဲ့ ယတြာချေဦးမယ်…
ညဘက် မနက်ဘက် မေတ္တသုတ်လေးတော့ ရွတ်ဦးမှပဲ….
ဗေဒင်နဲ့လက်ခဏာမတူဘူးထင်တယ်နော်.. ဘာမှနားမလည်ပေမယ့် မကြာမကြာကိုယ့်လက်ဖ၀ါးက အရေးအကြောင်းတွေကို သိတာလည်းမဟုတ်ပဲလိုက်ကြည့်မိတယ်..ကိုယ့်ကိုချစ်နေသူ မချစ်တော့အောင် ယတြာလည်းလိုချင်တယ်. အတည်ပြောတာပါ.
ကျနော်က ဂျူနီယာလည်းဖြစ် ရှေ့ ပိုင်းကရွာထဲလည်းအရောက်နဲတော့ 
ကိုရင်စည်ကို ဧကံသ အဖွဲ့ ကမှန်းမသိလိုက်ဘူးဗျာ
ကျနော့် ပို့ စ်ထဲမှာ ထည့် ရေးမိလိုက်ကလည်း ကျနော်သဘောကျခဲ့ တဲ့ 
ညဗေဒင်နဲ့  လမင်းကြီး ကိုဖတ်ပြီး ရိုးသားစွာ ပျော်စေလိုလို့ နောက်ခဲ့ မိတာ
ကိုရင်စည်ရဲ့  ယုံကြည်မှုကို ထိပါးသွားရင်ခွင့် လွှတ်ပါဗျာ
ပို့ စ်ထဲမှာ ကျနော်ပြန်ဖျက်ပေးချင်ပါတယ် ။ ကျနော့်အဆင့် က ဖျက်လို့ ပြင်လို့ 
မရဘူး ။ ကိုရင်စည်ပဲ ဖျက်ပေးပါတော့ ဗျာ ။ အလွန်ဘဲ အားနာလှပါတယ်
စိတ်မရှိနဲ့ နော် ကိုရင်စည် ။
ကိုရင်ရေ ၊ တိုက်ဆိုင်ချက်ဗျာ ၊ ဒီနေ့ မှ မနောမရ ဂျာနယ်အဟောင်းတစ်စောင် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ ၊ အဲဒီထဲမှာ ကိုရင့်အကြောင်းအရာလေးကို တစ်ခါ ထပ်ဖတ်ရတယ် ၊ နောက်ပြီး ကျုပ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ယတြာတစ်ခုလဲ ဖတ်ခဲ့တယ် ။
“ အသက်ကို ၇ နဲ့ စားပြီး ကြွင်းတဲ့ ဂဏန်းအလိုက် ၊ သူ့ နေ့ နဲ့ သူ ၊ အသက်ကို ၄ နဲ့ မြှောက်ပြီး ရတဲ့ ဂဏန်းအတိုင်း မုန့် လုံးရေပေါ် ဝယ် ၊ မုန့် လုံးရေပေါ် ၁၀လုံးကို ဘုရားလှူပြီး ဆုတောင်း ၊ ကျန်တဲ့ မုန့် လုံးရေပေါ်တွေကို အိမ်နီးချင်းတွေကို ဝေလိုက်ပါ ” ဆိုတဲ့ ယတြာ လေးလေဗျာ
အရှည်ကို ကိုရင် သိပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ နေ့ နံတွေကို ကိုရင် ပို့ စ်တစ်ခု ဆက်ရေးတင်ပေးဗျာ
ကျုပ်ကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ လုပ်ရမှာမို့ ၊ ကမ်းမင်းဆန်းဒေးကြရင် ယတြာချေပြီဗျို့ 
ကိုရင် ရေးထားတဲ့ ကွန့်မန့်ဒွေ ပျောက်ကုန်ပီ…
တားတားကွန့်မန့်မှာ ဘာအမှားပါရို့ရဲဗျာ… ဗြဲဗြဲ…
စိုမှာ စိုးလို့ မိုးမိဒယ်… အွဲ… မန့်မိဒယ်… ဗျာ..
ဟုတ်သားပဲ ကိုရင့်ကွန်းမန့်တွေ အကုန်ပါသွားရှာတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူးကိုရင် ။ တရာနဲ့သာ ဖြေပါတော့ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေက တခြားမှာ ကျမမန့်ခဲ့တာလေးတွေလည်း ပလုံကုန်တယ်